Xinhua Myanmar - COVAX က ကမ္ဘာ့နိုင်ငံပေါင်း ၈၆ နိုင်ငံသို့ ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး ၃၆ သန်းကျော် တင်ပို့ထားပြီးဖြစ်
COVAX က ကမ္ဘာ့နိုင်ငံပေါင်း ၈၆ နိုင်ငံသို့ ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး ၃၆ သန်းကျော် တင်ပို့ထားပြီးဖြစ်
အာဖရိကတိုက်အတွင်းရှိ ကို့တ် ဒီဗွာ နိုင်ငံ Abidjan အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်သို့ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၆ ရက်က COVAX မှ ပေးပို့သည့် ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးများ ရောက်ရှိလာစဉ်(ဆင်ဟွာ) WORLD
ကုလသမဂ္ဂ၊ဧပြီ ၆ ရက်(ဆင်ဟွာ)
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့(WHO) က ဦးဆောင်ဦးရွက်ပြုသည့် COVAX အစီအစဉ်ဖြင့် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများ COVID-19 ကာကွယ်ဆေး အညီအမျှ ရရှိစေရန် ဦးတည်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ လက်ရှိတွင် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံပေါင်း ၈၆ နိုင်ငံသို့ ကာကွယ်ဆေး ၃၆ သန်းကျော် တင်ပို့ထားပြီးဖြစ်ကြောင်း ကုလသမဂ္ဂပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတစ်ဦးက ဧပြီ ၅ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
“ COVAX ထံမှ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်သတ္တပတ်က အယ်လ်ဂျီးယားနိုင်ငံဟာ ကာကွယ်ဆေး အကြိမ်ရေ ၃၆,၀၀၀ ကျော်စာ လက်ခံရရှိခဲ့တယ် ၊ အဲဒီဆေးပမာဏဟာ နိုင်ငံထဲမှာ စတင်လုပ်ဆောင်နေပြီးဖြစ်တဲ့ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံရေးအရှိန်အဟုန်ကို တစ်ဖက်တစ်လမ်းက ကူညီပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်” ဟု ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်၏ ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် Stephane Dujarric က ပုံမှန်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
အယ်လ်ဂျီးယားနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂဌာနေကိုယ်စားလှယ် Eric Overvest ၏ပြောကြားချက်ကို ကိုးကား၍ Dujarric က “ ဘယ်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်မှ နောက်ကျ ကျန်ရစ် မနေရဘူးဆိုတဲ့သတင်းစကားကို သေချာစေမှာပါ ၊ မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့ ကျနော်တို့အဖွဲ့ဟာ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကို လေ့ကျင့်ပေးတာ နဲ့ ထိရှလွယ်တဲ့ပြည်သူတွေကို ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံဖို့ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးတာ ၊ ကာကွယ်ဆေးကို အအေးခန်းထဲအဆက်မပြတ်ထားရှိရေး ကို ထောက်ပံ့ပေးတာ စတာတွေကို ကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ် ” ဟု ဆိုသည်။
လာအိုနိုင်ငံသည် COVAX မှ လက်ခံရရှိသော ကာကွယ်ဆေးများဖြင့် ရှေ့တန်းတွင် လုပ်ကိုင်နေသော ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများအပါအဝင် ပြည်သူ ၄,၀၀၀ စာကို ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေးခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ကုလသမဂ္ဂဝန်ထမ်းအဖွဲ့သည် ဒေသခံ ညှိနှိုင်းရေးမှူး Sara Sekkenes Tollefsen ၏ ဦးဆောင်မှုဖြင့် ဧပြီ ၂ ရက်တွင် စတင်ခဲ့သော လာအိုနိုင်ငံ၏ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံရေး အစီအစဉ်တွင် ပံ့ပိုးကူညီခဲ့ကြောင်း ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်က ဆိုသည်။
လက်ရှိအချိန်ထိ လာအိုနိုင်ငံသည် ကာကွယ်ဆေး အကြိမ်ရေ ၁၃၀,၀၀၀ စာ လက်ခံရရှိထားပြီးဖြစ်ကြောင်း ၊ နောက်ထပ် ဆေးအကြိမ်ရေ ၃၅၀,၀၀၀ စာမှာ လာမည့်ရှေ့လတွင် ထပ်မံ ရောက်ရှိရန် မျှော်လင့်ထားကြောင်း Dujarric က ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
“ နိုင်ငံ့လူဦးရေ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းကို ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေးနိုင်ရေး ရည်မှန်းချက်ပေါ့၊ ဒီနှစ်ထဲမှာ လူပေါင်း ၁.၆ သန်းခန့်ကို ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးသွားမယ် ၊ ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အနေနဲ့ လိုအပ်တဲ့ ဆေးထိုးအပ်တွေနဲ့ အခြားပစ္စည်းကိရိယာတွေကို ကူညီထောက်ပံ့ပေးပါတယ် ၊ ပြီးတော့ အဲဒီမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူတွေအတွက် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ဆက်လက်ပေးနိုင်ဖို့ ကျနော်တို့ ကြိုးပမ်းအားထုတ်သွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ် ” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။(Xinhua)
UNITED NATIONS, April5(Xinhua) -- COVAX,aWorld Health Organization-led initiative aimed at ensuring equal access to COVID-19 vaccines by various countries, has so far shipped more than 36 million doses of COVID-19 vaccines to 86 countries,aUN spokesman said Monday.
"The goal is to vaccinate 20 percent of the population -- that's around 1.6 million people -- this year. The UN team helped procure syringes and other materials, and we are also supporting efforts to ensure that people can continue access to healthcare services," he said. Enditem
Workers transfer boxes of COVID-19 vaccines arrived at Abidjan International Airport in Abidjan, Cote d'Ivoire, Feb. 26, 2021.
Previous Article တရုတ်နိုင်ငံ၏ Sinopharmကာကွယ်ဆေးများကို ဆားဘီးယားနိုင်ငံသို့ ပိုမိုတင်ပို့မည်
Next Article အိန္ဒိယနိုင်ငံ၌ နေ့စဉ် COVID-19 ဖြစ်ပွားသူ လူနာ ဦးရေ တစ်သိန်း ကျော်ထိ မြင့်တက်